Horohoron-tany mahery vao noraketina tao amin'ny Nosy Kreta, Gresy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Gresy » Horohoron-tany mahery vao noraketina tao amin'ny Nosy Kreta, Gresy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Manodidina ny 100 ny horohoron-tany 6.5 eto an-tany isan-taona. Ny horohoron-tany 6.5 dia mety hiteraka fahavoazana sasany. Any amin'ny faritra be mponina dia be ny fahasimbana.
Ilay horohoron-tany 6.5 voarakitra tao Kreta dia nidina hatramin'ny 5.9 - inona no tsy dia misy akony firy amin'ny ankamaroan'ny tranga
5.9 no refy EMSC tamin'ny 27 septambra (Alatsinainy tamin'ny 9.17 maraina) horohoron-tany tany amin'ny Nosy Greek of Crete.
Ny isan'ny mponina ao amin'ny faritra akaiky dia maherin'ny 480,000
Tsy mbola misy data momba ny fahasimbana na ratra
Crete dia toerana fitsangatsanganana sy fizahantany lehibe any Gresy ary ankafizin'ny mpitsidika eropeana avy any Alemana sy firenena maro hafa.
Ny bitsika voalohany dia nilaza fa nahatsapa ho vitsy an'isa ilay horohorontany, hoy ny bitsika hafa: niaina horohorontany mafy tany Stalis aho, Kreta io maraina io, nihovotrovotra ny efitrano iray manontolo.
Ny laharana faharoa dia nahena tamin'ny 6.0 ka hatramin'ny 5.8, ny sasany nampiakarina ho 6.2, ny sioka hafa kosa nilaza fa 6.5. Ny masoivohom-baovao Reuters dia nanamafy ny 6.5 tamin'ny halaliny 2km manondro ny EMSC.
Ny Center European Seismological Center (EMSC) kosa dia nanamafy tanjaka 5,9 sy halalin'ny 10 km.